कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालमाथी चिरपट र बोतलले हान्ने प्रयास - Nepal's Digital Newsportal
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाललाई नेकपाका कार्यकर्ताले बाटैमा रोकेका छन्। तनहुँको रिसिङ गाँउपालिका भवन उदघाटनका लागि पुगेका डा रिजाललाई नेकपाका कार्यकर्ताले बाटैमा रोकेका छन्। बाटो अवरोध गर्न आएका नेकपाका कार्यकर्ताले हातमा चिरपट, बियरको बोतल बोकेका थिए । उनिहरुले डा रिजाललाई आक्रमण गर्न खोज्दै फिर्ता पठाएका थिए।
गाँउपालिकाको बैठकले सर्वसम्मतिबाट सो भवनको उदघाटनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाललाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो विषयमा प्रहरी प्रशासनलाई समेत जानकारी थियो । तर नेकपा कार्यकर्ताहरुले आफ्नो गाँउपालिका भवन उदघाटनका लागि कुरी रहेका जनतालाई निराश पर्दै भवन उदघाटनका लागि जान लागेका रिजाललाई बाटो अवरोध गरेका हुन्।
‘नेकपाका कार्यकर्ताले एक्कासी मण्डले शैलीबाट बाटो अवरोध गरि कांग्रेस नेता रिजाल र तनहुँको रिसिङका जनतामाथि समेत अपमान गरेका छन्।’ घटनाको भर्त्सना गर्दै नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘पञ्चायतका मण्डलेहरुको शैली अनुशरण गर्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ता फासीवादी र अधिनायवादी शैलीमा प्रस्तुत भएको घटनाको म घोर भर्त्सना गर्दछु। सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नेकपाका कार्यकर्ताले मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्दै जान लागेका छन्।’
सो घटनाका दोषिलाई सरकारले कारवाही नगरेको अवस्थामा कांग्रेसका नेता पूर्वमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालमाथि नेकपा कार्यकर्ताले फरक विचार र सिद्धान्त स्वीकार गर्न नसक्ने फासिवादी शैलीमा अवरोध गरेकाप्रति सर्वत्र विरोध भएको छ।
सरकारले यस्ता मण्डले शैलीमा हुने गतिविधी नियन्त्रण नगरे नेपाली कांग्रेस देशभर सरकारका विरुद्ध लोकतन्त्र जोगाउनका लागि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने वरिष्ठ नेता पौडेलले बताए। यसअघि नेकपाले बाँके जिल्ला सभापति किरण कोइरालामाथि दोस्रो जागरण अभियानमा आक्रमण गरेको थियो।
तनहुँ घटनालाई कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भत्सर्ना गरेका छ्न्। उनले भनेका छ्न्, ‘अधिनायक आकांक्षाले शुरूवातमा आफ्नै कार्यकर्ताको हुर्मत लिन्छ मण्डलेकरण प्रारम्भ गरेर ! डा मिनेन्द्र रिजाल माथी भएको आक्रमण प्रयासको निन्दा गर्दछु। सालिनता त्यागि प्रतिपक्ष रांको र टायर बाल्दै दस-बीस बन्दमा ओर्लियोस् भनेर निम्तो दिइएको हो प्रधानमन्त्री ओलीज्यू? कि रोक्ने मण्डलेकरण ?’
कांग्रेसको वक्तव्य यस्तो छ:
गाउपालिकाको बैठकले सर्वसम्मतिबाट सो भवनको शिलान्यास डा मिनेन्द्र रिजालबाट गराउने निर्णय गरेको थियो। कार्यक्रमको विषयमा प्रहरी प्रशासनलाई समयमै जानकारी गराउँदा पनि प्रहरी प्रशासनले वेवास्ता गर्नु चिन्ताको विषय हो । फरक विचार र सिद्धान्त स्वीकार गर्न नसक्ने नेकपाका कार्यकर्ताको अधिनायकवादी चरित्र घोर निन्दनीय र आपत्तीजनक छ ।
सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नेकपाका कार्यकर्ताले एकपछि अर्को घटनाहरु दोहोर्‍याउँदै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्दै गई रहेको घटनाप्रति सतर्क रहन नेपाली कांग्रेस सबैलाई आग्रह गर्दछ । मण्डले शैलीमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण नगरे अधिनायकवादी सरकारका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाली कांग्रेसलाई नजिस्क्याउन र आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलको रुपमा प्रस्तुत हुन नेपाली कांग्रेस नेकपालाई चेतावनी दिन चाहन्छ । हाम्रा कुराबाट साभार